Messenger – Text and Video Chat for Free 224.1.0.18.117 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 224.1.0.18.117 လြန္ခဲ့ေသာ2လက
Application မ်ား ဆက္သြယ္ေရး Messenger – Text and Video Chat for Free
Messenger – Text and Video Chat for Free ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
* BRING SMS INTO MESSENGER - No need to open multiple apps to stay in touch. Use one app for SMS and Messenger.
* ရုံ Message ပေးပို့, ဖုန်းနံပါတ်များကိုဖလှယ် -Skip တစ်ဦးက Message ပေးပို့။ ဒါဟာ devices တွေကိုဖြတ်ပြီးချောမွေ့စွာပါပဲ။
* သည်မှောင်မိုက် MODE နဲ့တောက်ပခုတ်လှဲ။ အမှောင် mode ကိုအနက်ရောင်မှအဖြူကနေနောက်ခံ switching အားဖြင့်မျက်စိပေါ်မှာလွယ်ကူသောဝင်တစ်ဦးချောမွေ့ပြောင်လက်အသစ်များကိုကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။
* သင့်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုဖော်ပြ - မိုက်စတစ်ကာ Add တစ်ဦးကခုန် GIF ကိုပေးပို့နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖော်ပြရုပ်ပြောင်ကိုအသုံးပြုပါ။
* SHARE ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများ - ထို့နောက်ပုံပြင်များမှသူငယ်ချင်းများသို့မဟုတ်ရှယ်ယာပေးပို့တစ် filter ကိုသို့မဟုတ်ဒူဒယ် add, အ Messenger ကိုကင်မရာနှင့်အတူယခုအချိန်တွင် Capture ။
* ချီတက်ပွဲအုပ်စု - အစီအစဉ်များရွေးကောက်ပွဲနှင့်အတူရဖို့ Make, သင့်တည်နေရာကိုဝေမျှ, ဥပဒေကြမ်းနှင့်ပိုပြီးကွဲ။
* တစ်ဦးကတယ်လီဖုန်းသို့မဟုတ် Video Chat ON-Hop - ဟန်ထုတ်အချိန်မရွေး, နေရာမရွေးခေါ်ဆိုခသို့မဟုတ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကဗီဒီယိုအပေါ်လာပြီအားဖြင့် ** chat - filter များ optional ကို :) ** ခေါ်ဆိုမှုများက Wi-Fi ကိုကျော်အခမဲ့ဖြစ်ကြောင်းပေမယ့်မဟုတ်ရင်စံဒေတာစွဲချက်သက်ဆိုင်ပါသည်။
* တစ်ဦးကအသံ Message ပေးပို့ - စာသားမယ့်, ကမဖြတ်ပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်စံချိန်ထိမှန်နှင့်ဟုပြောမနာသီချင်းဆိုသို့မဟုတ်အသံကျယ်ကြောင့်ထွက်အော်ပေးပို့အခါ။
* (အမေရိကန်, ဗြိတိန်နှင့်ပြင်သစ်အတွင်းသာ) လုံခြုံရေးနှင့်အလွယ်တကူငွေပို့ - သင့်ဒက်ဘစ်ကဒ်သို့မဟုတ် PayPal က * အကောင့်ဖြည့်စွက်အားဖြင့် app ထဲမှာမိတ်ဆွေများထံမှပိုက်ဆံ Send နှင့်လက်ခံရရှိသည်။ * သာအမေရိကန်မှာရရှိနိုင် PayPal က။
* သင့်တည်နေရာကို share - အစည်းအဝေးတစ်ခုအစက်အပြောက်အကြံပြုရန်သို့မဟုတ်သင်အနည်းငယ်ဘုံဘိုင်နှင့်အတူသင့်တည်နေရာကိုဝေမျှခြင်းဖြင့်ဘယ်မှာမိတ်ဆွေများကိုပြောပြပါ။
* Business စကားပြောမယ် - အလွယ်တကူအပေးအယူနှင့်ပိုပြီးတွေ့ပါ, ဖောက်သည်ထောက်ခံမှုရကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုလုပ်သင့်အကြိုက်ဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပါ။
* သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ PLAY GAMES -, မိတ်ဆွေများကိုစိန်ခေါ်မယ်ဦးဆောင်တက်နှင့်သင်၏နောက်ဂိမ်းစွဲတွေ့ရှ။
* Messenger မှာထဲသို့ SMS ကိုဆွဲခေါ်ပါ - ထိတွေ့နေဖို့မျိုးစုံ apps များဖွင့်လှစ်ရန်မလိုပါ။ SMS နှင့် Messenger ကိုတ app ကိုအသုံးပြုပါ။
Messenger – Text and Video Chat for Free အတြက္ စတိုးအသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Messenger – Text and Video Chat for Free အား အခ်က္ျပပါ
smurphstore စတိုး 91 36.35k
Messenger – Text and Video Chat for Free ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Messenger – Text and Video Chat for Free အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 224.1.0.18.117
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://m.facebook.com/policy.php
File Size: 41.05MB
Release date: 2019-07-19 17:47:01
လက်မှတ် SHA1: 8A:3C:4B:26:2D:72:1A:CD:49:A4:BF:97:D5:21:31:99:C8:6F:A2:B9
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Facebook Corporation
အဖွဲ့အစည်း (O): Facebook Mobile
Messenger – Text and Video Chat for Free APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ